सुधीर बस्नेतको अन्तर्वार्ता–‘म ठगिएको छु, जति थियो बैंकले लिलामी गरेर खायो’ « Aarthik Sanjal सुधीर बस्नेतको अन्तर्वार्ता–‘म ठगिएको छु, जति थियो बैंकले लिलामी गरेर खायो’ – Aarthik Sanjal
सुधीर बस्नेतको अन्तर्वार्ता–‘म ठगिएको छु, जति थियो बैंकले लिलामी गरेर खायो’
३० कार्तिक २०७६, शनिबार २१:५१
तपाईंले जसरी परिभाषित गरेपनि अदालतले तपाईंलाई ठग भनेर फैसला गरिसकेको छ नी ?
ठगले आफ्नो परिवारलाई राम्रो गर्ला नी । आखिर के को लागि ठग्ने त ? राम्रो गाडी चढ्न, राम्रो घरमा बस्न, आनन्दको जीन्दगी जिउनका लागि मान्छेले ठग्ने हो । आजको दिनमा मैले पुर्खौली सम्पत्ति गएको छ । ससुरालीको सम्पत्ति स्वाहा बनाएको छु । यही कारणले मेरो सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । न त राम्रो गाडी चढेको छु । राम्रोसँग सुत्न समेत पाएको छैन । न त मेरो बैंकमा पैसा छ । न त मेरो घर नै छ । म कसरी ठग भएँ ?
जतिबेला तपाईंलाई ठगीको अभियोग लागेको थियो । त्यो समयमा तपाईंसँग सबैकुरा थियो नी होइन र ?
त्यतिबेला म नेपालको हस्ति व्यापारीमा थिएँ । हाउजिङमा टपमा थिएँ । अन्य व्यापार पनि टपमै थिएँ । सामान्य एउटा जागिर खाने मान्छेले काठमाडौंमा घर बनाउन सक्छ । हामीले अर्बौं रुपैयाँको व्यापार गर्ने मान्छेसँग त्यति सम्पत्ति हुने के नौलो कुरा थियो र । त्यतिबेला मसँग १७ अर्बदेखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म सम्पत्ति थियो ।
त्यतिबेला तपाईंसँग १७ अर्बदेखि २० अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?
काम गरेको हुँ । काम गर्दै गएपछि जग्गाको भाउ बढ्दै जान्छ । आज हामीले १० लाखमा किनेको जग्गा केही दिनमा एक करोडमा बिक्री हुन्थ्यो । हामीलाई जग्गाको भ्यालुले बढाएको हो ।
तपाईंको १८/२० अर्बको सम्पत्ति अहिले कहाँ छ ?
त्यही सम्पत्ति खान र म अगाडी बढेको देखेर नै धेरै मानिसहरु मेरा विरुद्ध लागे । मलाई अग्नि एयरबाट हटाउने प्रपन्च रचियो । जतिबेला मलाई पहिलो पटक हनुमान ढोका लगेर थुनीयो । त्यो मुद्दा अहिलेपनि उच्च अदालतमा छ । त्यतिबेला मलाई आफ्नो मुद्दामा पक्राउ गरिएको थिएन । धिरेन्द्र प्रसाद प्रधान भन्ने हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नाममा एउटा कम्पनि थियो । त्यो कम्पनिको मुद्दामा मेरो कतै समलग्नता नै नहुँदा पनि मलाई लगियो र टेलिभिजन मार्फत जाहेरी हाल्न प्रचार प्रसार गरियो । प्रहरीले नै त्यतिबेला प्रचार गरेको थियो ।
प्रहरी संगठनले नै तपाईंको विरुद्ध लाग्नु पर्ने के कारण थियो ?
हेर्नुस् नेपाल भनेको कसैको प्रभाव र दबावमा चल्ने मुलुक रहेछ । त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख कुवेर सिंह रानालाई कसैले म विरुद्ध दुरुपयोग गरेको हो । अग्नि एयर हत्याउन यो खेल भएको थियो । अग्नि एयर कसले हत्यायो सबैलाई जग जाहेर नै छ ।
तपाईंसँग भएको १८/२० अर्बको सम्पत्ति कहाँ कहाँ पुग्यो त ?
म २०६९ सालदेखि लुकेर भागेको छु । हनुमान ढोका हिरासतमा हुँदा धापासी हाइटको अर्बौंको जमिन र हाउजिङ लिलामी गरेर लगियो । २६ रोपनी जग्गामा रहेको अपार्टमेन्ट बैंकले लिलामी गरेर खायो । त्यसपछि लिलामी हुने क्रम जारी रहयो । एक पछि अर्को गर्दै सम्पत्ति लीलामीको प्रक्रियामा पुर्खौली सम्पत्ति, आफ्नो सम्पत्ति, आफन्तको सम्पत्ति सबै जान थाल्यो । आज बाँकी रहेको ठूलो सम्पत्ति भेगास सिटि पनि खान र लिलाम गर्न नपाएर मलाई नै समस्या पार्ने खेल भइरहेको छ ।
तपाईंको ओरेन्टल सहकारी पीडितको नाममा नै १० अर्ब ऋण छ । भेगास सिटि ५ अर्बको मुल्यांकन छ कसरी तिर्नु हुन्छ ?
हामीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रुपमा मिटिङमा राखिएको थियो । त्यतिबेला मैले समितिलाई भनेको थिएँ–‘तपाईंहरुले निकालेको डाटा गलत भो’
किनभने उहाँहरुको नियत नै मलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो ठग बनाउने कसरी हुन्छ मेरो ल्याबरिटिज धेरै हुन्छ भनेर देखाउने । साँवा पनि आउँदैन भनेर मानसिक यातना दिनका लागि उहाँहरुले १६ अर्ब १७ अर्ब भन्ने गर्नु भएको हो ।
वास्तवमा हाम्रो ओरेन्टल को–अपरेटिभको डिपोजिट भनेको चार अर्ब २० करोड हो । हामीले सेटलमेन्ट गरेपछि ३ अर्ब २० देखि ५० करोड मात्रै बाँकी छ । आज पनि म चुनौतीका साथ भन्नसक्छु । उहाँहरुले ३ अर्बको दाबी पनि गर्नसक्नु हुन्न ।
हाउजीङ तिर उहाँहरुले ७० करोड भन्दा बढी देखाउन सक्नुहुन्न । त्यसको ब्याजको स्याज जोडेर भएन । ६९ सालदेखि हामीले काम गर्न पाएका छैनौँ । ६९ सालमा हामीले हामीले साधारण सभा गरेर हाम्रो संस्था संकटमा रहेको र व्याज तिर्न नसक्ने घोषणा गरिसकेका थियौँ ।
हामीले ६९ सालदेखि आफ्नो सम्पत्ति केही छुन पाएका छैनौँ । भागेर र लुकेर हिँड्नु परेको छ । यसरी जीन्दगी विताएको मान्छेले के काम गर्छ ?
तपाईंबाट ठगिनेहरुको सुचीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रधानसेनापतिसम्म ठूला भिआइपी रहेछन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कसरी ठग्नु भयो ?
सबैभन्दा पहिले मैले ठगेको होइन । एउटा कुरा म स्विकार गर्न तयारछु मैले सानो उमेरमा ठूलो काम गरेँ । मैले काम थाल्दा १७/१८ वर्षको थिएँ । डुब्दा म ३७ वर्ष पुगेको थिएँ । मान्छेले महत्वकांक्षा पाल्नु पाप र गल्ती होइन । नत्र मान्छे चन्द्रमामा किन पुग्थ्यो । मेरो व्यवस्थापन कमजोरी भयो र धरासयी हुन म पुगेँ । यी ठूला मान्छेहरुले मलाई सोधेर पैसा राखेको होइन ।
ठगी भनेको त मैले तपाईंलाई चिनेर फकाई फलाई गरे पैसा लिएर बेपत्ता भएँ भने पो भन्न मिल्छ त । ठगले कहिलेपनि मेरो सम्पत्ति छ । म दिन्छु र मलाई काम गर्न देउ भन्दैन । त्यो किन भनिरहनु पर्थ्यो र । ६९ सालमा मेरो हातमा ४५ करोड रुपैयाँ रकम थियो । त्यही पैसा लिएर विदेश गएको भए हुन्थ्यो नी किन यो टेन्सन लिएर बस्नु पर्थ्यो र । अस्ति भर्खर म जेलमा बस्दा पनि भेगास सिटि दिनुस् तपाईंलाई कुन देशमा कति पैसा चाहियो ? आयोगले भनेको कुरा मान्दिनुस् ।’ भन्ने दलालहरु कति धेरै आएका थिए ।
के थिए ती दलाल ?
हप्तामा ३ जना मान्छे आउँथे । दलालहरु धेरै थिए । तपाईंको नाममा होइन तपाईले भनेको देशमा जति पैसा भन्यो त्यति दिन्छौँ भन्नेहरु थिए । त्यतिबेला म ठग भइदिएको भए त्यतिपैसा लिएर विदेशमा आनन्दले जीन्दगी विताउन सक्थेँ नी ।
तपाईंको यो आर्थिक दुर्घटनामा को दोषी हो ?
सबैभन्दा पहिले हाम्रो नितीको कुरा आउँछ । हाम्रो देशमा कसैले नयाँ नीति ल्याउँछ भने त्यसको प्रभाव के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नीति भोलीपल्टैबाट लागु हुँदा कसैलाई राम्रो त कसैलाई नराम्रो हुन्छ । हामी जो हाउजिङमा काम गर्थ्यौँ । एकाएक ब्याज बढ्यो । ९ प्रतिशतमा लिएको ऋण १६÷१७ प्रतिशत हुन गयो । कडा नीति आयो । तर कुनै समयसिमा दिइएन । एउटा नीति निर्माताले हिजो भइरहेको कामलाई ल्यान्ड गराउन एउटा समय दिनुपर्ने थियो । बाटो खोल्ने काम गर्नुपर्छ । तर, दूर्भाग्य त्यस्तो भएन । कोठा भित्र राखेर विरालालाई कुटे जस्तो गरियो । त्यो कारणले गर्दा धरासाही हुन पुथ्यो ।
एउटा व्यक्ति, र संस्थाले भन्दा पनि नीतिगत समस्या नै हो । पोलिसिले इन्सिच्युसनलाई छोयो, इन्सिच्युसनले हामीलाई छोयो । त्यो समय र आजै पनि नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो व्यावसाय घर जग्गा नै हो । हरेक घरघरमा नेपालमा जग्गा दलाल र व्यापारी छन् । त्यो समयमा आज एक लाखमा किनेको जग्गा भोलीपल्ट २ लाख हुन्थ्यो । सबैले जग्गामा हाले । दुर्घटना हुँदा त्यसको प्रभाव मलाई पर्यो । किनभने म ठूलो रुपमा थिएँ । ठूलो रुपमा भएकैले मलाई समस्या भयो ।
तपाईंको भनाईमा समय नदिइकन सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयले कति सम्पत्ति गुम्यो ? ती सम्पत्ति क–कसले खायो ?
– अनगीन्ती मान्छेहरुले खाए । धेरै मान्छे मेरो सम्पत्तिबाट अरबपति र करोडपति बनेका छन् । मलाई नै ठग र चोर भन्छन् । सम्पत्ति मेरो गुमेको छ । एउटा कुरा के हो भने १६ अर्बको सम्पत्ति भएको मान्छेले ४ अर्ब ठग्थ्यो होला र ! त्यतिबेला ४ अर्ब पैसा मेरो लागि केही पनि होइन ।
केही मान्छे धनी भएपनि एकाथरी मान्छेलाई त सडकमा पुर्याइएको छ नी ?
– सडकमा पुगेका मान्छेहरुको हगमा म के भन्छु भने कतिपयको दोष पनि छैन । सडकमा मात्रै होइन कतिपयले औषधी खान नपाएर मर्नु भएको छ । कतिपयको डिभोर्स भएको छ, घरमा कलह भएको छ । धेरै दुख पाएका छन् । बजारमा सुनिएको भन्दा धेरै पीडित भएका छन् । तर, हुँदाखेरी मैले पनि उहाँहरुलाई राम्रो ब्याज तिरेको थिएँ । यो दुर्खटनामा मलाई त्यहीँ भित्रका मान्छेले जाहेरी नहालेको भए सायद स्थिति अर्कै हुन्थ्यो यतिबेला । यद्धपी हामीले यसको सजाय पाइसकेका छौँ । ६९ सालदेखि, भोकै, लुकेर, भागेर दुख पाएर हिँडेको छु । त्यो एउटा ठूलो सजाय हो । अब समस्यालाई समाधान गर्नुतिर लाग्नुपर्छ । समाधान गर्न सबैले मलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ ।
तपाईंको सम्पत्ति पनि सकियो । यता पीडितलाई पैसा पनि तिर्न बाँकी छ कसरी तिर्नुहुन्छ ?
जति सम्पत्ति सकिएपनि हामीसँग भेगास सिटि बाँकी छ । विगत सात वर्षमा यसको भ्यालु हाई हुँदै गएको छ । हिजोको दिनमा एक जनालाई चार गुणा सम्पत्ति दिन पुग्थ्यो भने आजको दिनमा त्यति नभएपनि साँवा दिन सक्ने क्षमता मसँग छ । अहिले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाँकी होला । हाउजिङ तर्फ ७०÷८० करोड होला । बैंकले अक्सन गरेर मेरो सम्पत्ति सस्तोमा बेच्ने काम गरिरहेको छ ।
यसलाई म मुद्दामा आउने नै छु । हाल म आउन सक्दिन । किन भने कहाँबाट भ्याउँ । एउटा मान्छे चारैतिरबाट घाँटी न्याकिएको छ । अहिले भएको सम्पत्तिले सबैलाई तिर्न पुग्छ र म जिरोमा पुग्छु । जिरोमा पुग्दा पनि मैले १० अर्ब कमाए बराबर हुन्छ । किनभने नठग्दा नठग्दै पनि मेरो निधारमा ठगीको दाग लागेको छ । पीडितलाई रकम तिरेको दिन म खुसी हुन्छु ।
सरकारले तपाईंको समस्या समाधान गर्न बनाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले त तपाईंको भेगास सिटि लिलाम गर्ने निर्णय गरेको छ नी ?
– उहाँहरुले कसका लागि लिलामी गर्ने ? पीडित पक्षका लागि होइन र ? जबकी त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो । ओरेन्टल को–अपरेटिभका आधिकारिक प्रतिनिधि, पीडितको प्रतिनिधि, हाउजिङको प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको छ । उहाँहरु यो प्रोजेक्ट बनेपछि मात्रै पैसा आउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् । त्यहाँ पनि बुद्धिजिवी र विज्ञहरु छन् । जब पीडित नै त्यो भेगास बनाएर सम्पत्ति उठ्छ भनेर लागि रहेका छन् भने कसका लागि उहाँहरु लिलाम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।
पीडितका लागि लिलाम गर्न लागेको हो की अरु कसैका लागि लिलाम गर्न लागेको हो ?
त्रिपक्षिय सहमति त समितिका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गर्नु भएको हो । अहिले समितिको नेतृत्वमा आउनु भएको युवराज सुवेदीजीले त पीडितकै दुहाई दिएर लिलामी गर्ने सुचना निकाल्नु भएको हो नी ?
त्यस्तो भएको भए पीडितहरु नै किन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा जानु भयो ? किन उहाँहरुले युवराज सुवेदीको पटक पटक विरोध किन गर्नु भयो ? त्यो जरुरी थियो र ? उहाँहरु भन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्ष फेरिदैमा त्यो संस्थाको नीति पनि फेर्ने अधिकार उहाँलाई छैन । उहाँहरुले जबरजस्ती गर्न खोज्नु भएको हो । केको लागि लिलाम गर्न खोज्नु भयो त्यो विषयमा उहाँहरुलाई नै थाहा होला । ल ठीक छ लिलामी गरौँ । म पनि मन्जुर, पीडित पनि मन्जुर । तर कति पैसा आउँछ त ? हामीलाई चाहिएको ५ अर्ब, के ५ अर्ब आउँछ लिलामी गरेर ? आजसम्म कुनै डाटा दिन सक्नु भएको छ ?
उहाँले कसका लागि लिलामी गर्न लाग्नु भएको हो त ? तपाईंको आरोप कतातिर हो ?
म कसरी कसैलाई आरोप लगाउँ । होइन भनौँ भने पनि आधार देखिएको छैन । पीडितहरु मिलेर समाधानमा लागिरहनु भएको छ । यदि पीडितको भलो हुन्छ भने पैसा ल्याउनुस् । पारदर्शीतामा पैसा आउनु पर्यो । कसले किन्ने हो मलाई मत्लब छैन । एकतर्फी लिलाम गर्छु भनेर मात्रै हुन्छ ? लिलाम भनेको जसले सबैभन्दा बढी पैसा हाल्छन् उसलाई दिने हो । बीट हाल्ने मान्छे आएन भने सस्तोमा दिनुपर्ने हुन्छ । कसैलाई दोष दिन त मिल्दैन तर आशंकाहरु धेरै छन् ।
तपाईं प्रतिष्ठीत व्यापारी तर, लामो समय ठगी आरोपमा जेल बसेर आउनु भयो ? कस्तो अनुभूति भयो ?
मान्छे जेल बस्दैमा खराब हुँदैन । ठगी मुद्दा लाग्दैमा कसैलाई चोर भन्न पाइँदैन । म जुन कारण जेल बसेँ त्यही दाग मेटाउन अहिले लागि रहेको छु । मेरो कारण धेरै मान्छेले दुख पाउनु भएको छ । भोली यही जनताले मलाई फूलमाला लगाइदिने दिन पनि आउन सक्छ ।
उनीहरुलाई पीडा दिने त तपाईं नै हो नी फेरी ?
– व्यापारमा सही नियत राख्दा राख्दै दुर्घटना हुनु र नियतबस ठग्नु फरक कुरा हो । राम्रो हुँदाको समयमा मेरो कारण धेरैको विहे, बच्चा बच्चीको पढाई भएको छ । यदि म आज राम्रो भएको भए उहाँहरु सबैको राम्रो हुन्थ्यो । सहकारी भनेको सँगै हिँड्ने जाहाज हो । त्यो जहाज डुब्यो भने पाइलट मात्रै डुब्ने कुरा हुँदैन । म ६९ सालदेखि नै जेलमा बस्दै आएको हुँ । तीन पटक जेल बसेँ । फलानो एसपी सापले बोलाउनु भएको छ हनुमान ढोका आउनु पर्यो भनेर बोलाइन्थ्यो । किन भने ठूला बढाको पैसा हाम्रो सहकारीमा थियो ।
तपाईंको हाउजिङ, सहकारी र एयरलाइन्समा समस्या नै समस्या छ । समस्या नै समस्याको बीचमा कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
– हामी सबै व्यापारीले सिक्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा एउटा मान्छे गयो भने सबै व्यापार जाने बनाउनु हुँदो रहेनछ । व्यापारलाई अंगहरुमा विभाजन गर्नुपर्ने रहेछ । एउटा विग्रियो भने अर्को व्यापारले टेकओभर गर्नु पर्नेरहेछ । त्यस्तो अवस्था आएको भए अग्नि एयर विग्रँदा हाउजिङ विग्रने थिएन र सहकारी पनि चलिरहन्थ्यो । एउटै व्यक्तिले सम्हाल्दा समस्या हुने रहेछ । अलग अलग व्यक्ति र सिस्टममा जानु पर्ने थियो । अग्नि एयर, हाउजिङ र सहकारीलाई एउटै बास्केटमा ल्याउन खोजिरहेको छु ।
अग्नि एयर नै छैन कसरी बास्केटमा ल्याउनु हुन्छ ?
सिम्रिकले अक्सन गरेको कुरा त उसलाई थाहा भएको कुरा हो । हामीले सिम्रिकलाई दिएको जहाज हो । हाम्रो समय भर्खर सकिँदैछ । हामी डुबेपछि तीनवटा बैंकको दबावमा ब्याज र साँवा तिर्ने भनेर दिएको हो । अक्सन त ब्याज र साँवा नतिरेपछि हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी सिम्रीक एयरको थियो । सिम्रिक एयरलाई हामीले किन नसमात्ने त । बैंकले के हेरेर बस्यो ? बैंक दोषी हो की होइन ? बैंक फुस्कन खोजिरहेको छ ।
अहिले नेपालमा बैंक भनेको लुटिखाने भाँडो भएको छ । पहिले गाउँमा साहु महाजन हुन्थे । यतिबेला नेपालका बैंकहरुले साहु महाजनले जस्तो लुटी खाने धन्दा चलाइरहेका छन् । अहिले साहु महाजन छैन र जनताको अधिकार आयो भनिन्छ तर होइन रहेछ । बैंकमा अहिले पनि त्यो सिस्टम छ ।
ती पीडितहरु जसको घरबार उडेको छ । उनीहरुलाई कसरी र कहिले उद्दार गर्नु हुन्छ ?
२०६९ सालदेखि अहिलेसम्म ७ वर्ष भयो । आजसम्म मैले काम गर्न पाएको छैन । बल्ल मलाई काम गर्ने ढोका खुलेको छ । त्यही पनि अवरोध कायम छ । काम गर्न शुरु गर्ने वित्तिकै मसँग समलग्नै नभएको परिवारका सदस्यको खाता बन्द गर्ने काम भइरहेको छ । यद्धपी सयमा ५० वटा बाटोहरु खुल्ला छन् । म काम गर्दैछु ।
६ महिना भित्रमा ओरेन्टल पीडित र हाउजिङ पीडितले केही राहत पाउनेछन् । क्यास बाढ्छु भन्न म सक्दिनँ । किनभने बजारको अवस्था यही हो । ठूला बुकिङकर्तालाई हाम्रो अपार्टमेन्ट लिइदिनुस् त्यसको केही अंश सानो डिपोजिटरलाई दिनुस् जसले फ्ल्याट किन्न सक्दैन ।
तपाईंको सहकारी पीडितको सुची हेर्दा अनामनगरको युवराज सुवेदी पनि देखिन्छ । समिति अध्यक्ष युवराज सुवेदी हुन् ?
– उहाँ सहकारीबाट ऋण लिने माध्येको पीडक देखिनु हुन्छ । पीडित होइन । यो प्रश्न मैले उहाँलाई गर्दा मेरो होइन भन्नु भयो । किन भने सबै कागजपत्र उहाँहरुको हातमा छ । कागजात गायव गर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यस्तो व्यक्ति हो भने त्यो समितिमा बस्न मिल्छ र ?
समितिमा बस्न मिल्ने नमिल्ने प्रश्न गौँण हो । हामीलाई त्यो कानुन पनि लाग्दैन । समाधानका लागि राज्यको कुनै निकाय पनि आउन सक्छ । त्यो निकायले बीचमा बसेर समाधानको भूमिका निभाउनु पर्ने हो । एक उहाँको नाममा ऋण देखिएको छ । त्यसलाई प्रष्ट पार्न उहाँले सक्नु भएको छैन ।
उहाँ त सल्टाउन लाग्नु भएको छ नी अवरोध त तपाईंहरुले गर्नु भएको भनिन्छ त ?
सल्टाउने खाका के हो ? उहाँसँग के छ ? मलाई डिपीआर माग्नु भयो । तर, कुनै इन्जिनियर बिना डिपिआर बुझाएको भनेर दोष लगाउनु भयो । त्यो भनिरहँदा मैले निवेदन लगेर दर्ता गर्दा सिस्टम नपुगेको कुरा किन दर्ता गर्नु भो ? दर्ता गरेको भनेको स्विकार गरेको होइन । उहाँहरुलाई डिपीआर भनेको के थियो थाहा थिएन । मैले नै सिकाएको हुँ । आज म चुनौती दिन तयार छु नेपालमा कसैले त्यो डिपीआर कुनै ठाउँमा गलत छ भनेर देखाओस् अनि मात्रै म मान्न तयार छु । उहाँले हामीलाई फैसजा गरेर रेजेक्ट गर्नु भयो । उहाँलाई के अधिकार छ ? म त इन्जिनियर होइन हस्ताक्षेर गर्न मिलेन । उहाँ को त त्यसो भए ? उहाँ इन्जिनियर हो ? के आधार छ ? कुनचाहीँ इन्जिनियरले लेखेर दियो ?
डिपीआर भनिएको कागजात पेश गर्नु भएको भनिएको छनी ?
उहाँको लागि कालो अक्षेर भैँसी बराबर । उहाँको लागि त्यो कागजात नै हो ।
समितिले तपाईंहरुलाई काम गर्न समस्या बनायो र अदालत जानु भयो । अदालतले के आदेश गर्यो ?
समस्या समाधानको प्रयोजनका लागि हामी समितिमा गयौँ । हाउजिङ, सहकारी र हामीबीच समस्या थियो । उहाँहरुलाई समस्या समाधान गर्न साक्षीको रुपमा राखिएको हो । साक्षीमा राखेको मान्छेले यो गर्न दिन्न त्यो गर्न दिन्न भन्ने अधिकार कहाँबाट हुन्छ ।
सरकार र समितिसँग तपाईंको अपेक्षा के हो ?
समितिसँग के कुरा भयो र । नेपालका ३ करोड जनतासँग पनि मलाई मत्लब भएको कुरा होइन । मेरो आफ्नो हाउजिङका पीडित जुन उपभोक्ताहरु हुनुहुन्छ । ओरेन्टलको पीडित जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले साथ दिएर अगाडी बढिरहनु भएको छ । त्यसरी नै साथ दिनु भयो भने यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ । सरकारले कुनै अवरोध गरिरिदनु भएन । कतिपय ठाउँमा रोक्का राखिएका छन् ती ठाउँहरुमा फकुवा गरिदिनु पर्छ । हामीले सरकारलाई पैसा देऊ मान्छे देऊ भनेका छैनौँ । मलाई मुख्य विश्वास गर्नुपर्ने मेरा पीडितहरुले हुन् । नेपाली ३ करोड जनताले ठग र चोर भनेपनि मलाई मत्लब छैन । यी जो पीडित छन् उनीहरुले मलाई ठग र चोर भनेका छैनन् । त्यसकारण म ठग चोर होइन ।
तपाईंको भनाईको मत्लब निर्वाध रुपमा ठगीरहन पाउनुपर्छ भन्ने हो ?
ठगीको परिभाषा के हो ? यसअघि नै भनिसकेको छु । ठग्ने मान्छेको नियत नै ठग हुन्छ । समस्या समाधान गर्छु भन्दै भन्दैन । मैले भनिरहेको छु,–‘अहिले भेगास सिटि बनेपनि मलाई चाहिँदैन । त्यहाँबाट उठ्ने पैसा मेरो हातमा पर्दैन । उपभोक्ता समितिले राख्छ । त्यो समिति र ओरेन्टल को–अपरेटिभको सहकार्यमा बिल भुक्तानी गर्न लागेको छ । पैसामा म कतै समलग्न छैन । मलाई जुन यो ठग भन्ने दोष लागेको छ यो हटोस् त्यो नै मेरो इच्छा हो ।
तपाईंलाई केही दिनअघि फेरी ठगी आरोपमै थुनियो नी ?
म किन थुनियो भन्ने कुरा भनिरहन पर्दैन । तर, कानुन अनुसार म छोडिएँ । यहाँ कानुन पनि छ नी ।
के तपाईंलाई जेलमै सडाउन आँटेको हो ?
जसले जाहेरी हाल्नु भयो उहाँहरुको इच्छा हेर्दा त्यस्तै लागेको छ । म बाहिर बस्दा यसलाई लिलामी गर्न पाइएन । पीडितहरुले साथ दिएका छन् ।
सुधीर बस्नेतले पीडा सुनाउने र मान्छेलाई सँधै पीडामा पारिरहने शैली मात्रै हो भन्छन् नी ?
त्यो कुरा सही हो । २०६९ सालदेखि धेरै कुराको आश्वासन दिइयो । अहिलेसम्म आश्वासन नै बाँडीराखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मान्छेहरुले भन्ने सत्य कुरा हो । तर मैले काम गर्ने मौका कहिले पाएँ त ? २०६९ सालमा म थुनिएँ । हनुमान ढोकाबाट निस्कँदा सारा सम्पत्ति रोक्का थियो । ६ महिनापछि पुर्पक्षका लागि थुन्ने प्रपञ्च भएपछि लुकेर हिँडेँ । भूकम्पको समयमा फर्किएर आएँ । पीडितहरुलाई साथ दिएर अगाडी बढ्दै थिएँ । फेरी पक्राउ परेँ र जेल बसेँ । बाहिर निस्किएर भेगास सिटि बनाउन लडाईँ गरेँ । मैले राम्रोसँग काम गर्न पाएकै छैन ।
अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार तपाईंलाई काम गर्न कसैले रोक्दैन । सरकारले पनि अब सहयोग गर्लान् अब न्याय पाउँछन् त पीडितले ?
अब मैले काम थालेको छु । सबै कुरालाई मैले ट्रयाकमा लगिसकेँ ।
सामाजिक रुपमा तपाईंलाई सबैले ठग भन्छन् । तपाईंलाई आत्मग्लानी हुँदैन ?
सबैभन्दा पहिला मिडियाले हेर्नुपर्छ म वास्तवमा ठग हो की होइन । गाली गरेर मिडिया चल्दैन र जे मन लाग्यो त्यो लेख्न पनि हुँदैन । त्यसकारण सरसर्ती हेर्दा मान्छे ठगिएका छन् । तर वास्तवमा भएको के हो भनेर मिडियाले बुझ्नु पर्छ । नियतबस ठगिएको हो की दुर्घटना भएको हो । मिडियाले यसलाई समाधान कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । ठग भनेर बाटो खुल्छ भने खोलौँ । जति लेखेपनि हुन्छ लेखौँ मलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, समस्या समाधान हुनुपर्छ । म ठग होइन भन्नेकुरा मलाई मात्रै थाहा छ ।
भनेपछि तपाईं आफै ठगिएको हो त ?
पीडितका अगाडी म ठगिएको छु भन्न भएन । पीडित भन्दा बढी म ठगिएको छु । २०६९ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न समयमा मलाई दुख दिइएको छ ।
मान्छेको लागि पैसा भन्दा ठूलो जीन्दगी हो । जीन्दगीदेखि नै ठगिएको छु । समाजमा घृणित भएको छु । सम्पत्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै लुटेर खाएका छन् । बैंक, व्यक्ति सबै मलाई नै ठगिरहेका छन् । जति थियो बैंकले लिलामी गरेर खायो । मिनिमम भ्यालु गरेर लिलामी गरेर मलाई सिद्याइयो । (Source : diyopost.com)
२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार १७:१०
१८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १८:१७
आज नेप्से ४० दशमलव ६४ अंकले उकालो लाग्यो
१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०६:५४
प्रभु क्यापिटलमा डिम्याट खाता खोल्दा ९ वर्ष ढुक्क, हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्ने समस्याको समाधान
सपोर्ट लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभा चैत २० गते, लगानीकर्तालाई यो वर्ष रित्तो रित्तो	२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १०:३९
मिर्मिरे लघुवित्तको चैत १८ गते चैत १८ गते वार्षिक साधारण सभा	२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०८:५७
वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको हिस्सा घट्दै	२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०८:१५
मेलम्ची पानी सुरुमा पुरानै वितरण प्रणालीबाट	२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:२५
सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा कीर्ते गरी बिक्री, नौ जना पक्राउ	२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:२०
आज ८ मार्च अर्थात् १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइँदै	२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:१५